▷ Ngokushesha: I-Apple's IPad 2021 Iyatholakala MANJE Iyathengiswa Ngo-€ 319.98 E-Amazon - 【 The Comparison 】 2022
Ngokushesha: I-Apple's 2021 iPad iyatholakala manje ngo-€319.98 ku-Amazon
I-QUIMICAMP - I-alboral esheshayo ye-chlorine ps exutshwe 5k qp 202205
I-chlorine esheshayo yokwelapha ukushaqeka emachibini okubhukuda.; I-Granulated; 5 kg
Uma ufuna ukuthola idili elishibhile le-iPad, usenhlanhleni. Sisanda kubona i-Apple's 2021 10,2-inch iPad isibuyile esitokisini futhi idayiswa ngama- $319.98 kuphela (yayingu-$329) e-Amazon. Intengo engcono kakhulu ongayithola njengamanje yethebhulethi engu-64GB kanye ne-€20 nje engaphezu kwenani lerekhodi.
I-iPad yango-2021 ifaka i-chip ye-Apple ye-A13 Bionic enamandla futhi iqala ngo-64GB wesitoreji, ukuze ukwazi ukugcina amamuvi amaningi futhi ulande izinhlelo zokusebenza nemidlalo. Ithebhulethi yesizukulwane sesishiyagalolunye iphinde yathola ikhamera ebheke phambili engu-12-megapixel ethuthukisiwe futhi ihlanganisa isici se-Apple's Center Stage ukukusiza ukuthi uhlale kuzimele. Uphinde uthole isibonisi se-Retina esingu-10,2-intshi, i-Apple Penseli nokusekelwa kwekhibhodi ehlakaniphile, nempilo yebhethri ebabazekayo yosuku lonke.
Le modeli ethile ye-iPad bekunzima ukuyithola esitokweni muva nje, futhi nakuba ithebhulethi yehle yaba ngu-€299 emasontweni amabili edlule, yaphela ngokushesha. Idili lanamuhla le-iPad elempunga yesikhala, okuwukuphela kwemodeli esesitokweni. Uma ukuthengisa kwanamuhla kuthengisa, i-iPad engu-10,2-intshi iyatholakala e-Walmart, kodwa uzokhokha u-€426.
Idili lanamuhla elihle kakhulu le-Apple iPad
Amadili we-iPad amaningi
Iziphesheli eziningi ze-iPad zanamuhla
Ungahlola amanye amadili ashibhile e-iPad angcono kakhulu, futhi uma unentshisekelo kumadivayisi we-Amazon, ungabheka amadili ashibhile amathebulethi e-Amazon Fire.
Ungaphinde ubheke ngabomvu amadili angena ngamadili ethu e-Super Bowl TV kanye negayidi yokuthengisa yethu yoSuku Lomongameli lwango-2022.
I-iOS 16 izofaka izinhlelo zokusebenza ezintsha ze-Apple nezinguquko ezinkulu